को बन्लान् नयाँ जेम्स बोन्ड ? | ईमाउण्टेन समाचार
असोज २५, २०७८ पढ्न ४ मिनेट
काठमाडौं । हलिउडमा सफल सिरिजमध्येको एक हो ‘जेम्स बोन्ड’ । स्पाई थ्रिलर याे फिल्मलाई दर्शकले रुचाउने गरेका छन् । सन् १९६२ देखि नै सुरुवात भएको सिरिज विश्वभर चर्चित छ । यसमा विभिन्न समयमा विभिन्न कलाकारले आफूलाई जेम्स बोन्डको रूपमा अगाडि ल्याइसकेका छन् ।
यद्यपि ‘जेम्स बोन्ड’ को रूपमा कहिल्यै पनि महिला नहुने-नबनाइने निर्माता बार्बरा ब्रोकलीले स्पष्ट पारेकी छन् । बोन्ड रंगका बारेमा विकल्प खुल्ला भए पनि महिला नहुनेमा आफूहरू स्पष्ट भएको उनको भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा छन् । कोरोनाभाइरसका कारण सिर्जित अवस्थाले गर्दा बारम्बार रिलिज डेट सरेको ‘नो टाइम टु डाइ’ नेपाल र भारतमा आउँदो अक्टोबर १४ बाट प्रदर्शनमा आउनेछ ।
जेम्स बोन्ड बनेर पुन आउने भए ड्यानियल क्रेग
कुन-कुन देशमा छन् मोटरसाइकल लिफ्ट सेवा ?
काबुलमा भएको आत्मघाति आक्रमणमा ८ पत्रकारसहित २९ को मृत्यु
जुमबाटै अदालतले गर्‍यो मृत्युदण्डको फैसला
पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक मालीमा विद्रोहीको आक्रमण
२०२४ को ओलम्पिक फ्रान्समा हुने, अमेरिकाले छोड्यो दाबी